Texas inovhara pasi muganho wekuyambuka mapoinzi kuti umise kubuda kwevatorwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Texas inovhara pasi muganho wekuyambuka mapoinzi kuti umise kubuda kwevatorwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
KuInternational Bridge muDel Rio, Texas, vanopfuura zviuru zvisere vanoenda kune dzimwe nyika vayambukira kuUS uye parizvino vakamirira kubatwa neUS Border Patrol.
Tsika neUS Border Dziviriro zvakazivisa nezuro kuti vamiririri vayo vakasangana nevapoteri vasiri pamutemo munaAugust, kuwanda kwevanopfuura mazana matatu kubva muna Nyamavhuvhu 208,887. Mwedzi wega wega gore rino kusvika pari zvino waona manhamba ezvakaitika achienzaniswa nemwedzi imwe chete muna 300, 2020 uye 2020, uye vanhu vanosvika mamirioni 2019 vakayambuka muganho zvisiri pamutemo muna2018 kusvika parizvino.
Texas gavhuna anoraira ese ekumaodzanyemba muganho wekuyambuka mapoinzi akavharika kumisa mafashama evasingatenderwe kuenda munyika.
Abbott akazivisa kuti, kusiyana neMutungamiri Biden, Nyika yeTexas inoramba yakazvipira kuchengetedza miganhu yedu uye kuchengetedza maAmerican.
Gavhuna weTexas, VaGreg Abbott, vapa chirevo nhasi vachizivisa nezvekuvharwa kwenzvimbo nhanhatu dzekuyambuka muganho wenyika, "kumisa macaravani aya (anotama zvisiri pamutemo) kubva mukukunda nyika yedu."
Texas Gavhuna Greg Abbott
"Kuregeredza kukuru kwehutungamiriri hweBiden kuita basa ravo uye kuchengetedza muganho kunotyisa," Abbott, Republican, akadaro muchitauti.
"Kusiyana neMutungamiri Biden, Nyika yeTexas inoramba yakazvipira kuchengetedza muganho wedu nekudzivirira vanhu vekuAmerica."
"Ndakaudza Dhipatimendi Rezvekuchengetedza Ruzhinji neTexas National Guard kuti vavhure vashandi nemotokari kuti vavhare nzvimbo nhanhatu dzekupinda mumuganhu wekumaodzanyemba kumisa macaravhani aya kuti areruke nyika yedu."
PaInternational Bridge muDel Rio, Texas, vanopfuura zviuru zvisere vatorwa vayambukira kuUS uye parizvino vakamirira kubatwa na US Border Patrol vakuru, maererano nemishumo yeChina.
Ruzhinji rwakawedzera zvakapetwa ruviri kubva pa4,000 kusvika pa8,000 kubva Chitatu, nevemutemo vanotaura kuti vazhinji maHaiti.
Chiyero chevanhu vazhinji, chinonzi chakakunda Border Patrol, iyo, sekutaura kwaAbbott, yakakumbira iyo State yeTexas kuti ipindire uye ivhare kuyambuka.
Del Rio inongova imwe yemakumi matatu ematatu ekuyambuka pamuganhu weTexas neMexico.
Vapoteri vanosvika pamharadzano idzi vanogona kukumbira hupoteri kana kuzviratidza kuBorder Patrol kuti vasungwe vobva vaburitswa kuUS, neiyi Obama -nguva yekubata uye kuburitsa 'mutemo wakadzoserwa neMutungamiri Joe Biden kutanga kwegore rino.
Pamusoro pezvo, maneja weBiden akamira Trump'S' Ramba uri muMexico 'mutemo, uyo waida kuti vese vanouya vanoenda kune dzimwe nyika kuti vagadzire hupoteri kana zvimvumo zvekupinda kubva kuMexico uye vamirire ipapo kusvikira zvataurwa izvi zvagadziriswa.
Biden akagadziridzawo Trump'' Sisitimu yekudzosera kumashure vese vanoyambuka muganho panguva ye COVID-19 denda, kuveza chisaririra chevane makore ari pasi pe-18s, zvichikonzera kukwidziridzwa kwevasina vana vakaperekedza vachiita rwendo kubva kuCentral America kuenda kuUS.
Nekudaro, maererano neCustoms uye Border Kudzivirirwa dhata, ruzhinji rwevayambuka muganho muna 2021 vanhu vakuru vasina kuroora.
Tsika dzeUS uye Border Kudzivirirwa yakazivisa nezuro kuti vamiririri vayo vakasangana nevamiriri vasingabvumirwe 208,887 300 muna Nyamavhuvhu, kuwedzera kwevanopfuura mazana matatu kubva muna Nyamavhuvhu 2020. Mwedzi wega wega gore rino kusvika parizvino yakaona huwandu hwekusangana uchienzaniswa nemwedzi mumwe chete muna 2020, 2019 na2018, uye mamirioni 1.1 vanhu vayambuka muganho zvisiri pamutemo muna2021 kusvika parizvino.
Nguva pfupi mushure mekuzivisa kwake, Gavhuna Abbott vakaburitsa chimwe chirevo vachiti manejimendi eBiden akaraira kuyambuka kweTexas kuti irambe yakavhurika.
Abbott akati Dhipatimendi rePublic Safety uye veNational Guard vashandi vacharamba vari panzvimbo yekumisa kuyambuka.
Union Yakamhan'arira Qantas Airways Kupfuura Yakakura Denda ...
P & O Cruises Australia inowedzera kumbomira paSydney uye ...
Vols kubva kuBudapest kuenda kuDubai pane flydubai ikozvino
IMEX America Inofara Kuti US Iri Kurerutsa Kufamba ...
Hunhu husingagamuchirwe: France inoyeuka nhume dzayo kuUS ...